တရုတ်အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ဆီလီကွန်ဖျော်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - GNS
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ဆီလီကွန်ဖျော်စက်
အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် Silicon SEALANT G22 သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် acetoxy cure silicone sealant ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတံခါးများကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်များ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ အတွင်းပိုင်းကရိယာများနှင့်တံခါးများကဲ့သို့တပ်ဆင်ခြင်း၊ ၁၈ နှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ GNS ထုတ်ကုန်များကိုအာရှ၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ဥရောပနှင့်အာဖရိကဒေသများရှိနိုင်ငံပေါင်း ၇၈ နိုင်ငံနှင့်ဒေသများသို့ရောင်းချခဲ့သည်။
အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ဆီလီကွန် SEALANT G22 ၏ 1.PRODUCT Feature
2. အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်များဆီလီကွန် SEALANT G22 ၏ Parameter (အထူးပြု) ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း
အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် SILICONE SEALANT G22 3.APPLICATION
4. အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ဆီလီကွန် SEALANT G22 ၏သိုလှောင်မှုနှင့်သက်တမ်း
6. အထွေထွေရည်မှန်းချက်силикон SEALANT G22 ကိုထုပ်ပိုးခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
hot Tags:: အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ်၊ လက်ကားရောင်း၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများ၊